လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ကြပါစေ…. – ရှအေလငျး
လူဖြစ်ရကျိုး နပ်ကြပါစေ…ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ တဦးနဲ့ တဦးတွေ့ ရင် မင်းနေကောင်းလား စီးပွားရေးအဆင်ပြေလားမမေးကြပဲနဲ့ …မင်းဝိပဿ နာအားထုတ်နည်းသိပြီလား အားထုတ်ပြီးပြီလားလို့ တောင် မေးနေကြရပြီတဲ့…အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တရားထိုင်ချင်လို့စာရင်းပေးးတာ သန်းနဲ့ ချီပြီးရှိသတဲ့…ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအခတ်အခဲဖြစ်နေလို့ အားထုတ်ချင်တိုင်း အားထုတ်ခွင့်မရဖြစ်နေကြရတယ် တဲ့ …
၀ိပဿနာထိုင်ချင်သူတွေဟာ အများကြီးပဲတဲ့….အာဖဂန်နစ္စတန်က နေတိုးစစ်သားတွေလည်း စစ်တိုက်နေတဲ့ကြားထဲက ဝိပဿနာတရားကို မရရအောင်အချိန်လုပြီးထိုင်နေရတယ်တဲ့….
ဥရောပတတိုက်လုံးက အကျဉ်းထောင်တွေ ဆေးရုံတွေမှာ ထောင်မှူးတွေဆရာဝန်တွေရဲ့ စနစ်တကျ ပြသမှူ့နဲ့ …အကျဉ်းသားတိုင်း လူနာတိုင်း နေ့ စဉ်ဝိပဿ နာတရားတွေရှူ့မှတ်နေကြပါတယ်တဲ့…
အာဖရိကတိုက်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းပွဲတွေမကြာခဏ လုပ်နေရသတဲ့ ….တချို့အာဖရိကသားတွေဟာလည်းဝိပဿ နာတရားတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားမှတ်နေကြတယ်တဲ့….
တကယ်တာ့…….ဝိပဿ နာ ရှူ့မှတိဘူးမှ လူဖြစ်ကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်….ဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလည်းသတ္တဝါတွေကို ဝိပဿ နာ ရှူ့ မှတ်စေပြီးသံသရာကကျွတ်စေချင်လို့ ပါ…
ဒါန သီလ သမထ လောက်ကတော့ဘုရားမပွင့်တဲ့ သာသနာပမှာလည်းရနိုင်ပါတယ်….ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ယုံနဲ့ တန်ဘိုးမကြီးသေးပါဘူး …ဝိပဿ နာရှူ့မှတ်ဘူးမှ တန်ဘိုးရှိတာပါ…
မြန်မာလူမျိး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဝိပဿ နာမရှူ့ မှတ်ဘူးသူတွေ ဘယ်လိုရှူ့ မှတ်ရမယ်ဆိုတာမသိသူတွေ အများကြီးတွေ့ နေရတာဟာ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ….ကိုယ့်တန်ဘိုး ကိုယ်နားလည်းသူများကိုယ့်ဘာသာရဲ့အတိမ်အနက်ကိုနားလည်သူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…. Credit:းမြင့်ခိုင်
လူဖွဈရကြိုး နပျကွပါစေ…ဂြာမဏီနိုငျငံမှာ တဦးနဲ့ တဦးတှေ့ ရငျ မငျးနကေောငျးလား စီးပှားရေးအဆငျပွလေားမမေးကွပဲနဲ့ …မငျးဝိပဿ နာအားထုတျနညျးသိပွီလား အားထုတျပွီးပွီလားလို့ တောငျ မေးနကွေရပွီတဲ့…အမရေိကနျနိုငျငံမှာ တရားထိုငျခငျြလို့စာရငျးပေးးတာ သနျးနဲ့ ခြီပွီးရှိသတဲ့…ကမ်မဋ်ဌာနျးဆရာအခတျအခဲဖွဈနလေို့ အားထုတျခငျြတိုငျး အားထုတျခှငျ့မရဖွဈနကွေရတယျ တဲ့ …
၀ိပဿနာထိုငျခငျြသူတှဟော အမြားကွီးပဲတဲ့….အာဖဂနျနစ်စတနျက နတေိုးစဈသားတှလေညျး စဈတိုကျနတေဲ့ကွားထဲက ဝိပဿနာတရားကို မရရအောငျအခြိနျလုပွီးထိုငျနရေတယျတဲ့….
ဥရောပတတိုကျလုံးက အကဉျြးထောငျတှေ ဆေးရုံတှမှော ထောငျမှူးတှဆေရာဝနျတှရေဲ့ စနဈတကြ ပွသမှူ့နဲ့ …အကဉျြးသားတိုငျး လူနာတိုငျး နေ့ စဉျဝိပဿ နာတရားတှရှေူ့မှတျနကွေပါတယျတဲ့…
အာဖရိကတိုကျမှာလညျး ဗုဒ်ဓဘာသာကူးပွောငျးပှဲတှမေကွာခဏ လုပျနရေသတဲ့ ….တခြို့အာဖရိကသားတှဟောလညျးဝိပဿ နာတရားတှကေိုကွိုးကွိုးစားစားမှတျနကွေတယျတဲ့….
တကယျတာ့…….ဝိပဿ နာ ရှူ့မှတိဘူးမှ လူဖွဈကြိုးနပျတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ….ဘုရားရှငျပှငျ့တဲ့ ရညျရှယျခကျြကိုကလညျးသတ်တဝါတှကေို ဝိပဿ နာ ရှူ့ မှတျစပွေီးသံသရာကကြှတျစခေငျြလို့ ပါ…
ဒါန သီလ သမထ လောကျကတော့ဘုရားမပှငျ့တဲ့ သာသနာပမှာလညျးရနိုငျပါတယျ….ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဖွဈယုံနဲ့ တနျဘိုးမကွီးသေးပါဘူး …ဝိပဿ နာရှူ့မှတျဘူးမှ တနျဘိုးရှိတာပါ…
မွနျမာလူမြိး ဗုဒ်ဓဘာသာတှေ ဝိပဿ နာမရှူ့ မှတျဘူးသူတှေ ဘယျလိုရှူ့ မှတျရမယျဆိုတာမသိသူတှေ အမြားကွီးတှေ့ နရေတာဟာ ဝမျးနညျးစရာပါပဲ….ကိုယျ့တနျဘိုး ကိုယျနားလညျးသူမြားကိုယျ့ဘာသာရဲ့အတိမျအနကျကိုနားလညျသူမြား ဖွဈနိုငျကွပါစေ…. Credit:းမွငျ့ခိုငျ
သတိထားကြပါ ဒီနေ့ ရေတက်တော့မယ် ရေမြုပ်နိုင်တဲ့ အိမ်တွေ ရွေ့သင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရွေ့ထားသင့်ပါတယ်
“တရားစခန်းဝင်ရင်း သိလာတဲ့ တရားသဘောတွေကို မျှဝေလိုက်တဲ့ ပိုပို”
ဆိုင်းသံကြားရင်​ မ​နေနိုင်​​အောင်​ ခုန်​​ပေါက်​ ကခုန်​တဲ့ ကျိုက်ထိုက...
“ရုပ်လှသလို ….တပည့်တွေကို ကြင်နာစွာဆက်ဆံလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့...